Cayraatii U Dhaxaysay barazil Iyo Argantin Oo Ku Dhamaatay Shan Daqiiqo – Heemaal News Network
Ciyaartii xiisaha badnayd ee ay adduunyada oo dhami sugaysay ee Brazil iyo Argentina ayaa la joojiyey oo lagu kala dareeray shan daqiiqadood oo kaliya iyadoo socota, waxaana garoonka ka baxay ciyaartoyda martida ah iyadoo aanay CONMEBOL iyo FIFA midkoodna wali war rasmi ah kasoo saarin.
Ciyaarta oo ku bilaabatay jawi muran ku jiro oo ay dawladda Brazil ku hanjabtay inay masaafurinayso ciyaartoyda reer Argentina ee ka yimid waddanka Ingiriiska sabab la xidhiidhka Karantiil ay tahay inay galaan maadaama ay iyaguna dalkaas khadka cas geliyeen kaddib markii ay UK casaan geliyeen Brazil oo ay tallaabadaas oo kale kaga aarsadeen.
Saraakiil Brazil ah ayaa soo galay gudaha garoonka iyagoo doonaya inay qabtaan afarta ciyaaryahan ee Emiliano Martinez, Cristian Romereo, Gio Lo Celso iyo Emiliano Buendia, laakiin ciyaartoyda iyo shaqaalaha reer Argentina ayaa isku dayay inay joojiyaan tallaabadaas, waxaana garoonka dhexdiisa ka abuurantay rabshad.
Ciyaartoyda Argentina ayaa dhamaantood iskaga dareeray garoonka waxaase dib ugu soo laabtay Lionel Messi oo iska bixiyey garankii uu ku ciyaarayay iyo tababare Scolani oo la dooday masuuliyiinta Brazil oo horena ay tababare Tite, Neymar iyo Casemiro ay dood dheer ugu dhex maraysay garoonka dhexdiisa.
Xidhiidhka kubadda cagta Argentina ayaa qoraal degdeg ah oo uu ku baahiyey bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in gebi ahaanba la kanslay ciyaartii socotay ee Brazil iyo Argentina oo ay sidaas ku baaqatay xalay.
Waxa hadda la sugayaa inay war rasmi ah soo saaraan xidhiidhka kubadda cagta Adduunka ee FIFA iyo midka Latin America ee CONMEBOL, halka xidhiidhka Brazil iyo dawladdana laga sugayo inay war kasoo saaraan ciyaartoyda dalka laga tarxiilayo.
Madaxweyne Farmaajo Oo Diiday Xil ka Qaadistii Taliyaha NiISA Fahad Yasiin.